Momba anay - SolarShine
Izahay no mpamatsy manam-pahaizana momba ny vokatra azo avy amin'ny angovo azo havaozina ho anao, mpanondrana vokatra mafana amin'ny masoandro ary paompy hafanana manerantany.
SolarShine dia misahana manokana amin'ny famokarana heater-drano amin'ny masoandro hatramin'ny 2008, lasa iray amin'ireo mpamokatra solika mpamokatra hafanana sy hafanana amin'ny masoandro any Shina. SolarShine dia mamatsy hatrany ny serivisy famolavolana tetikasa matihanina ho an'ny tsena anatiny sy ny mpanjifa izay avy amin'ny firenena mihoatra ny 30.
12 + taona niainana fanamboarana matihanina; 6000+ tetik'asa fanamainana rano mafana; 200000+ heaters rano mafana na paompy hafanana ho an'ny trano.
Ny vokatra azonao vidiana avy aminay dia misy mpamory masoandro, heater rano amin'ny masoandro, paompy hafanana, rafitra fanamaintanana hafanana mifangaro hafanana amin'ny masoandro, chiller rano, fitoeran-drano fitehirizana rano mafana sy kojakoja rehetra ho an'ny rafitra fanamainana rano mafana.
SolarShine dia afaka manome anao ny vokatra toy ny:
1. Mpanangona masoandro amin'ny takelaka fisaka ho an'ny rafitry ny rano mafana amin'ny masoandro.
2. Mpantsaka mpamokatra herinaratra fantsona vacuum ho an'ny rafitra rano mafana amin'ny masoandro.
3. Mampiasà na mifangaro heaterina amin'ny masoandro miaraka amina mpanangona masoandro.
4. Heater amin'ny rano mandeha amin'ny masoandro miaraka amina mpamory masoandro fantsona.
5. Paompy hafanana hafanana rivotra ho an'ny tetikasa ara-barotra.
6. heater amin'ny rano ho an'ny rano fanafanana hafanana.
7. Paompy hafanana ambany toerana ambany ho an'ny faritra mangatsiaka.
8. Paompy hafanana dobo ho an'ny dobo filomanosana anaty na ivelany.
9. Chiller rano indostrialy ho an'ny fampangatsiahana rano.
10. Rafitra hafanana hafanana mifangaro hafanana avy amin'ny masoandro mamorona rano mafana.
11. tanky fitehirizana rano mafana, tanky buffer.
12. Ny kojakoja rehetra ho an'ny rafitra fanafanana rano amin'ny masoandro sy ny rafitra paompy hafanana, toy ny maso masoandro, paompy mivezivezy, paompy booster, tanky fanitarana, valves, sns.
Inona ny fanampiana hafa azonao raisina avy aminay?
Manome famokarana OEM / ODM izahay, afaka mamokatra vokatra azo avy amin'ny masoandro voaangona sy paompy hafanana arakaraka ny zavatra takinao na sary famolavolana.
Manana mpamorona matihanina sy teknisianina izahay, izay manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy fametrahana ho an'ny rafitra fanafanana rano mafana na trano mafana. Noho izany izahay dia afaka manome vahaolana feno araky ny tetikasanao, manampy anao hitahiry ny vidin'ny fividianana ny rafitra fanamainana rano avy amin'ny masoandro.
Azonao atao ny mianatra fampahalalana bebe kokoa momba ny hafanana masoandro na paompy hafanana amin'ny alàlan'ny fitsidihana Source, na mifandray aminay amin'ny info@solarshine01.com isaky ny manana fanontaniana na famotopotorana ianao.
Miaraka amin'ny mpanjifa: